Umuntu wase-Ethiopia wethula uhlobo lwezicucu zezinyawo zakhe ngamathayi asetshenziswe kabusha - i-Afrikhepri Fondation
isonto, Januwari 24, 2021
Si-oleRebels wuhlobo lwezicathulo ezikhiqizwa e-Ethiopia. Lezi zingcweti zaseTopiya zisebenzisa ithalente lazo ekusebenzeni ukwakha izicathulo zokuziphatha ezipholile kunazo zonke futhi ezikhululeke kakhulu emhlabeni. Bayabakhiqiza ngokuphumelela efeni labo lobuciko benomthamo omuhle wokuklama nabo bonke ubuciko nomphefumulo wabo. Umphumela wokugcina izicathulo ezenza ikhasimende libe nomuzwa wokuzwa nokwazisa izakhi zenhliziyo, ingqondo nokwakhiwa kwezandla kwazo okuyinkimbinkimbi kakhulu.
I-brand craziest futhi ethize yokuziphatha ekhanda emakethe kuseSwitzerland.
I-soleRebels ayiyona nje enye brand brand "eyenziwe China". soleRebels yi-brand yezinwele ezimhlophe. Ekhiqizwa ngesandla e-Ethiopia, eyenziwe ngezinto zokusetshenziswa okusetshenziselwa kabusha, ezemvelo nezendawo, zidweba izinhliziyo zabo emphakathini womphakathi, imibala nemigqi ye-Afrika.
i-soleRebels Footwear inguhlobo lwezicathulo zokuziphatha ezenziwe ngezandla ngaphansi kwezimo zokusebenza ezinomusa kakhulu e-Ethiopia. Izinto ezisetshenzisiwe zivela ekululameni futhi ziyizinto eziphilayo nezemvelo. I-soleRebels inike amandla ukwakhiwa komphakathi wangempela e-Ethiopia onemiholo nezimo zenhlalo ezingatholakali kwenye indawo ezweni.
i-soleRebels izinikele ngokujulile futhi ngokwemvelo ekuthuthukisweni okusimeme. Akusilo ucwaningo ngokwalo kepha ngesinye sezisekelo eziyinhloko zomkhiqizo. "Izimpande, isiko namathayi", lo musho ufingqa umoya osimeme womkhiqizo.
Ngaphandle kokuthi "amehlo amakhulu" amaqembu amakhulu, kuphela uReebels owazalwa enesifiso sokwakha izindinganiso ezinhle zomphakathi kanye nabo bonke abathintekayo emphakathini.
i-soleRebels idale imisebenzi engaphezu kwe-140 eminyakeni yayo engu-8 ikhona nokuthi e-Ethiopia kuphela. Okungcono kunalokho, akuzona izindawo zabasebenzi kuphela ezidaliwe kepha futhi nezikhundla zenani eliphakeme ezifana nabaklami nezikhundla zezohwebo ezimele kuleli thuba elingandile kubantu abasha.
soleRebels ngumphakathi weqiniso lapho wonke umuntu endaweni yakhe, ukubaluleka kwakhe, amalungelo akhe. Ngaphandle kwamaholo angaphezu kwezinga labaseTopiya, abasebenzi baseRebels kuphela abanokuthola usizo lwezokwelapha, izingane zabo zikwazi ukuthola i-nursery ekhokhelwayo futhi zingazuza ngokufunda ukuze ziqhutshwe phambili.
soleRebels ibhalwe yi-WFTO "World Fairtrade Organization".
Yonke i-onlyRebels izinto eziwusizo ziphinde zenziwe kabusha, eziphilayo noma zendawo zondliwe. Amathayi aphrintiwe, i-jute, ukotini ophilayo, izinhlamba, isikhumba yizinto ezikhiqizayo. Yonke into yenzelwe izinto ezibonakalayo ezitholakale endaweni yangakini futhi ezenziwe ngabadwebi bendawo.
Imana enhle kakhulu "yonke i-eco-system". Iphakethe liye lancipha ibe yindlela yabo elula.
Izicathulo zeSoleRebels zikhiqizwa ngesandla ngabaseTopiya. Lonke iketango lenani lezinto zokusetshenziswa lisezandleni zase-Ethiopia.
Yonke insiza eyenziwa yilabo abasebenza ngezandla, okwenza kube nenhlalakahle yesifunda sonke.
Meroitic - Ulimi olulahlekile loFaro abamnyama
Idokhumenti ngokuphila kukaBob Marley